Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. सिट थपेर पैसा छाप्छन् ‘डिलक्स’ बस – Emountain TV
सिट थपेर पैसा छाप्छन् ‘डिलक्स’ बस
काठमाडौं, २७ असार । यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सामन्य बस सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित स्वीकृत लिइएको सपना डिलक्समा ३५ जना यात्रु अटाउने सिट क्षमता छ ।
क्याबिनसमेत गरी चालक, सहचालक र सहयोगीसहित ४२ जनासम्मको क्षमता सपना डिलक्समा छ । सपना डिलक्समा दुईवटा सिटबीचको दूरी १६ इन्च छ । यात्रु बस्दा भने त्यति सहज हुँदैन । साधारण बस सेवाको स्वीकृति लिएको रमाइलो कम्पनीको सपनास्तरीय सेवा दिने ‘डिलक्स’ हैन तर उसले डिलक्स नाम लेखेर यात्रुसँग भाडा बढी लिने छुट भने पाएको छ । मापदण्ड नै नपुगेका सपना डिलक्स जस्तै धेरै कम्पनीका बसले यात्रुसँग भाडा असुल गरिरहेको विषय भने अनुगमनका लागि कसैको चासो पनि बन्दैन ।
साधारण र डिलक्स सेवा दिने बसको भाडादर फरक हुन्छ । तोकिएको भाडादरमा डिलक्स बसले २० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेर यात्रुसँग लिन पाउने प्रावधान छ । त्यसका लागि यात्राका क्रममा यात्रुले आरामदायी महसुस गर्नुपर्दछ । अगाडि र पछाडिको दुई सिटबीचको दूरी १८ इन्च, एलईडी लाइट, मनोरञ्जनका लागि टेलिभिजन, पानी राख्ने ब्यागदेखि फोहोर राख्ने डस्बिनसम्मको व्यवस्था गाडीभित्रै हुनुपर्दछ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा लेखेको छ ।